Goobjooge Ingiriiska Ah Oo Wax Ka Yidhi Doorasho Ku Sheegii Maamulka Jabhada SNM, Markii Uu Dib Ugu Soo Noqday London | Sarmaanyo.com
Goobjooge Ingiriiska Ah Oo Wax Ka Yidhi Doorasho Ku Sheegii Maamulka Jabhada SNM, Markii Uu Dib Ugu Soo Noqday London
Posted on December 9, 2012 by Editor	Wakaalada wararka ee caalamiga ah ee lagu magacaabo Reuers ayaa dhawaan waxay waraysi la yeelatay M.Wilson oo dhalashadiisu tahay British, kana qayb galay doorasho ku sheegi maamulka jabhada SNM ee musuqmaasuqu biya dhigay.
Goobjoogahani markii uu ku soo laabtay magaalada London wuxuu waraysigiisa ku bixiyey waxyaabo mucjisooyin ah oo aanu horay ugu arag intuu ka qayb galayey doorashooyin heer caalami ah, wuxuu indhihiisa ku arkay carruur da’doodu u dhexeysay 10-14jir, oo codbixinta ku noqnoqonayey, runtiina aad baan ugu fiirsaday aadna waan ula yaabay.
M.Wilson oo ka mid ahaa goobjoogayaashii ka socday wadanka Ingiriiska wuxuu kaloo waraysigiisa ku sheegay, inuu arkay dad qaangaadh ah oo iyaguna sida ciyaalkaasi ku noqnoqonayey.
Waraysiga M.Wilson wuxuu intaasi ku daray inuu aad ula yaabay markii uu ka war helay goobtii uu joogay oo mar kaliya isu bedeshay goob lagu kala gadanayo walxaha dareera ee loo adeegsado in lagu dhaqo khadka lagu sunto qofka codkiisa dhiibtay…
Taa waxaa ka sii daran buu yidhi, waxaa jirey xidhiidh hoose oo wada shaqayneed oo u dhexeeyey maamulayaasha goobahaasi fadhiyey iyo kuwa ay ugu yeedhaan komishanka, oo ay la safan yihiin xisbi ku sheega Siilaanyo.
M.Wilson oo waraysigiisu dheera wuxuu kaloo carabka ku dhuftay markii aan ku soo laabtay London waan filayey inay wax badani soo bixi doonaan, maadaama ay hadheeyeen is daba marin badan iyo ku shubasho aan xad lahayn, waxaanay hilmaameen siday beesha caalamku isha ugu haysey.
Kaydka Sawirrada	News AgenciesDeadly Battles in Central Somalia Between Al Shabaab and Nomads - AllAfrica.com May 24, 2013Somalia celebrates the 50th Anniversary of the OAU in Mogadishu [In Pictures] - Horseed Media May 24, 2013K'naan turns to film to tell Somalia's story - Hamilton Spectator May 24, 2013	2013 Sarmaanyo Media LLC - All rights reserved.